ပျော်ဖို့ကောင်းပြီး ချိုချဉ်လိုမိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဒုတိယလှိုင်းအတွင်း ငွေကြေးသုံးစွဲမှုကို ဘယ်လိုမျိုးစီမံခန့်ခွဲမလဲ???
ပျော်ရွှင်မှုကို ဝေးဝေးပြေးစေနိုင်သော အလေ့အထလေးများ
ထိုင်းလူနေမှုပုံစံက အခြားယဉ်ကျေးမှုတွေနဲ့ မတူကြောင်း သက်သေပြနေတဲ့ အချက် (၅)ချက်
မျက်နှာအသားအရေလှပဖို့အတွက် သံလွင်ဆီကပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးများ
မိန်းကလေးတွေကိုယ်တိုင်က ဘယ်တော့မှထုတ်ပြောမှာမဟုတ်တဲ့ သမီးရည်းစားလျှို့ဝှက်ချက်များ
ကျွန်မတို့ဘဝမှာ ယုံကြည်မှုအရှိဆုံးလို့ ခံစားရတဲ့ အသက်အရွယ်
ချစ်သူအသစ်တွေ့နေတဲ့သူတွေ ပြုလုပ်တတ်တဲ့ စရိုက်လက္ခဏာများ
ကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူပြုပေမယ့် အလွန်အကျွံမစားသင့်တဲ့ အစားအစာများ
ပိုးမွှားတွေရဲ့ရန်ကိုကာကွယ်ဖို့ ဥယျာဉ်မှာ စိုက်ပျိုးထားသင့်တဲ့ အပင်များ
အိမ်သာသုံးစက္ကူမရှိတော့ရင်သုံးဖို့ဆိုပြီး ဉာဏ်ကောင်းလွန်းသူတွေရဲ့ အကြံပြုချက်များ
Stay at home ဖြစ်နေချိန်မှာ အပျင်းပြေစေဖို့အတွက် Anime ဇာတ်ကားကောင်းများ
by Nyein Thu
in Lifestyle, Lotaya, Uncategorized
တစ်ချို့လူတွေဟာ လူတွေအပြည့်ရှိနေတဲ့အခန်းကျဉ်းလေးထဲရောက်သွားတဲ့အခါ လူတိုင်းကို ပြုံးပျော်စေပြီး comfort ဖြစ်စေတဲ့ခံစားချက်တွေကို တကယ်ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ကြင်နာမှုဆိုတာ ကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဟာ စစ်မှန်ကောင်းမွန်သော အလေ့အကျင့်တွေကို လေ့ကျင်ပေးမယ်ဆိုရင် ချိုမြိန်ပြီး ချစ်စရာကောင်းသောမိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ? ဒါတွေတင်မကဘဲ အပျော်တွေနှင့် ပျော်ရွှင်မှုတွေကို တစ်ခြားလူတွေကို သယ်ဆောင်လာပေးမယ့် fun girl လေးတစ်ယောက်ဖြစ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ?
ရေချိုးပါ ( ၂ နာရီကြား တစ်ခါချိုးခိုင်းတာ မဟုတ်ပါဘူး၊ ၃ ယောက်မှ တစ်ခေါက် ရေချိုးတတ်တဲ့ မယ်သန့်ရှင်းလေးတို့အတွက်ပါ)။ အသားအရေကို ဂရုစိုက်ပါ။ နောက်ပြီး သင့်ရဲ့ ဆံပင်ကို သင့်ထက် ပိုကြည့်ကောင်းအောင် နူးညံ့ပျော့အိနေအောင် ထားပါ။ မနက်ခင်းတိုင်းမှာ သင့်မျက်နှာလေးကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန်သန့်စင်ပါ။ ချွေးပေါက်တွေကို ပိတ်ဆို့မသွားစေမယ့် ဆပ်ပြာကို သုံးပါ။ ရေချိုးပြီးတဲ့အခါ သင်လတ်ဆတ်နေစေဖို့ deodorant ကို သုံးပါ။
၂။ သင့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်စတိုင်လ်နောက်ကိုပဲ လိုက်ပါ
ပေါ့ပါးပြီး သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေမယ့် အဝတ်အစားတွေကို ဝတ်ဆင်ခြင်းက သင့်ကို ပြုံးပျော်စေပါလိမ့်မယ်။ သင်ဟာ ဘယ်လိုလူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ဖော်ပြဖို့ နှင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုရှိနေဖို့ ရွေးချယ်ဝတ်ဆင်တတ်မယ်ဆိုရင် သင့်ကို ပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိစေပါလိမ့်မယ်။ ပေါ်ပြူလာဖြစ်တဲ့ အဝတ်အစားတွေကို ဝတ်ဆင်ကြည့်ပါ။ Brand ဆန်တဲ့အဝတ်အစားတွေကိုလည်း စမ်းကြည့်ပါ။ သို့ပေမယ့် ကိုယ်တိုင်နှင့်လိုက်ဖက်မှုရှိတဲ့ အဝတ်အစားတွေဆိုရင် အဆင်ပြေနိုင်ပြီး မစပ်အဟပ်အရောင်တွေကို ပေါင်းစပ်ပြီး မဝတ်ပါနဲ့။ ဂဂျိုးဂကြောင် စတိုင်လ်တွေပဲ ထွက်လာပါလိမ့်မယ်။
၃။ ကျောင်းမှာ / အလုပ်မှာ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကြိုးစားပါ
အဖွဲ့အစည်းတွေ (သို့) အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းတွေမှာ ပါဝင်ပါ။ သင့်ရဲ့ အနာဂတ်ဟာ လှပသောလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်နေတာကြောင့် ဦးနှောက်ကြီးကြီးနဲ့ ရပ်တည်ပါ။ ပထမဆုံးအကြိမ်အနေနဲ့ လူနည်းနည်းလေးအပေါ်မှာ ကောင်းကြည့်ပါ။ သင့်အနေနဲ့ တစ်ခုခုကိုကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်သေးဘူးဆိုရင် အလေ့အကျင့်ကို ကောင်းကောင်းမလုံလောက်သေးတာကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ထပ်ကြိုးစားကြည့်ပါ။ တစ်ခုခုလိုအပ်တဲ့အခါ တစ်ယောက်ယောက်ဆီမှာ အကူအညီတောင်းကြည့်ပါ။ သင့်ရဲ့ အောင်မြင်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကြွားဝါတာမျိုး ရှောင်ကြဉ်ပါ။ လူတွေဟာ သူတို့ကိုယ်သူတို့ တစ်ခြားလူတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်တတ်ကြပြီး စိတ်ပျက်လေ့ရှိကြပါတယ်။ လူတွေက သင့်ကို အောင်မြင်မှုတွေကို မေးလာတဲ့အခါ ရိုးသားသင့်ပါတယ်။ တမင်ရွဲ့စောင်းပြီး ဖြေတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
၄။ သင့်ရဲ့ ဖြစ်တည်မှုကို ချစ်ပါ
သင်ဟာ ပြည့်စုံသော (perfect) မိန်းကလေးတစ်ယောက်တော့လည်း ဖြစ်နေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သင့်ရဲ့ ဖြစ်တည်မှုတွေကို ချစ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ သင်ဟာ ဒီအဆင့်ကို လိုက်လုပ်မယ်ဆိုရင် သင့်ရဲ့ တောက်ပတဲ့အနာဂတ်ဟာလည်း သင့်ရဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ လမ်းကြောင်းပေါ်မှာပဲ ရှိနေပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လေးစားမှု (self-esteem) နည်းနေပြီး ရုန်းကန်နေရမယ်ဆိုရင် သင်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ cele တွေ (သို့) ကိုးကွယ်တဲ့ ဘုရားသခင်ဆီကနေ သင့်ရဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် (self-confidence) ကို ခေတ္တခဏချေးငှားနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှု (self-confidence) ကို မရမချင်းပေါ့။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လေးစားမှု (self-esteem) နိမ့်ကျနေတယ်လို့ခံစားရတယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သူငယ်ချင်းကောင်းတစ်ယောက်ကို ဆက်ဆံသလိုမျိုး ဆက်ဆံပါ။ ကြိုးစားရုန်းကန်ပြီး ပင်ပန်းနေရတယ်ဆိုရင် ”ငါသာ ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရှိခဲ့ရင် ဘာပြောမလဲ” လို့ တွေးကြည့်ပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ချစ်ဖို့ ဆိုးဆိုးရွားရွားခက်ခဲနေမယ်ဆိုရင် လမ်းညွှန်ပေးနိုင်မယ့် လူကြီးတစ်ယောက်ယောက်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။ နောက်ဆုံးမှာ အဆင်မပြေနိုင်တော့မှ ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးပါ။
၅။ သင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နှင့် စိတ်ကို ကောင်းကောင်းဂရုစိုက်ပါ
fun ဖြစ်ပြီး ချိုမြိန်တဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာက သင်ဟာ မောပန်းနွမ်းနယ်နေမယ်ဆိုရင်၊ ဖိစီးမှုတွေများပြီး လောင်ကျွမ်းပြာကျနေမယ်ဆိုရင် အင်မတန်ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့ကြောင့် အရင်ဆုံးကိုယ်တိုင်က ရွှင်လန်းနေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ညဘက် အိပ်ရာဝင်နောက်မကျဖို့၊ ဆိုရှယ်မီဒီယာရဲ့ ဝါးမျိုမခံရဖို့နှင့် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အချိန်များများပေးနိုင်ဖို့ ကြိုးစားပါ။ နောက်တစ်ခုက အသေးစိတ်အခြေခံလိုအပ်ချက်လေးတွေကို ဖြည့်ဆည်းထားပါ။ ဒီလိုအသေးစိတ်အရာလေးတွေက လူကို စိတ်အညစ်စေဆုံးပစ္စည်းကိရိယာလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံး စည်းကမ်းရှိပါ။
သင်ဟာ ချိုချိုသာသာစကားပြောတတ်မယ်ဆိုရင် လူတွေဟာ သင့်ကို သင်တတ်နိုင်တာထက် (သို့) သင်ဖြစ်နိုင်တာထက် သင့်ကို ပိုကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်လို တွေးထင်ကြပါလိမ့်မယ်။ အတန်းထဲမှာ ပြုလုပ်ရမယ့်အရာတွေကို လိုက်နာပါ။ အဖြေအမှားတွေအတွက် မကြောက်ပါနဲ့။
တစ်ခြားလူတွေဟာ လေးလေးစားစားနှင့် နားထောင်စေချင်ကြပါတယ်။ သင်သာ နားထောင်ကောင်းသူတစ်ယောက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင် သူတို့ကြိုက်တဲ့အရာတွေ၊ သူတို့ ဘယ်လိုလူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာ သင်ယူနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သူတို့က သင်နဲ့ စကားပြောရတာလည်း သဘောကျကြပါလိမ့်မယ်။
၈။ တစ်ခြားလူတွေကို judge လုပ်ခြင်းရှောင်ကြဉ်ပါ
သင်ဟာ တစ်ခြားအကြောင်းအရာတွေကို judge လုပ်နေမယ်ဆိုရင် လူတစ်ချို့က ရယ်ကောင်းရယ်ကြပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် လူတွေက သင့်ကို ယုံကြည်ဖို့ တော်တော်လေးကြောက်ရွံ့သွားနိုင်ပါတယ်။ တစ်စုံတစ်ယောက်အကြောင်းကို သင်ကောင်းကောင်းနားမလည်ဘူးဆိုရင် အဲ့ဒီလူရဲ့ အပြုအမူတွေ၊ အယူအဆတွေ နှင့် တာဝန်ဝတ္တရားတွေအကြောင်းကို ဟာသလုပ်တာမျိုး ရှောင်ကြဉ်သင့်ပါတယ်။ စာနာခြင်းဆိုတာဟာလည်း ကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း သတိရပါ။ တစ်ခြားလူတွေရဲ့ ဖြစ်တည်မှုတွေကို တန်ဖိုးထားပါ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်း အမြဲတမ်းကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ပဲ တွန်းအားမပေးပါနဲ့။
by Hein Myat
အခုဆိုရင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ဒုတိယလှိုင်းက မြန်မာနိုင်ငံကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ရိုက်ခတ်လာပြီဖြစ်တာကြောင့် Stay Home အမိန့်တွေ ထုတ်ပြန်ပြီး ရောဂါကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။ ပိတ်ပင်တားဆီးမှုတွေ များလာတာနဲ့အမျှ နိုင်ငံအတွင်းက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလည်း တစ်စထက်တစ်စ ထိခိုက်စေနိုင်တာကြောင့်...
ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာ ရွေးချယ်မှုတစ်ခုပါတဲ့။ ဒါ့ကြောင့်မို့ အရေးကြီးဆုံးကတော့ ပျော်ရွှင်မှုကို ရှာဖွေဖို့လိုအပ်တယ်လို့ တွေးနေသရွေ့ ပျော်ရွှင်မှုကို ဘယ်တော့မှ ရလာမှာမဟုတ်ဘူး။ တစ်ခါတလေကျတော့လည်း ပျော်ရွှင်မှုကနေ တားဆီးနေတဲ့အကျင့်တစ်ချို့ကို ဖယ်ရှားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီလိုအမူအကျင့်တွေကို ဖယ်ရှားပေးလိုက်ခြင်းက မိမိကိုယ်ကိုယ်ပျော်ရွှင်ဖို့ အခြေအနေတွေကိုတောင် ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ ၁။...
by Nandar Lwin
နေရာသစ်တစ်ခုရဲ့ အနှစ်သာရကို အမှန်တကယ်သိရှိနိုင်ဖို့ နှင့် နေထိုင်သူတွေရဲ့ အလေ့အထတွေအကြောင်းကို လေ့လာဖို့ အားလပ်ရက်ခရီးတိုလေးတစ်ခုတည်းနဲ့ မလုံလောက်ပါဘူး။ ကိုယ်သွားမယ့်နေရာအကြောင်းကို နှံ့နှံ့စပ်စပ်သိထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ Lifestyle Myanmar ပရိတ်သတ်ကြီးတွေအတွက် မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ဆင်တူတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုအသွင်အပြင်အကြောင်းလေးတွေကို...
သံလွင်ဆီ (Olive Oil)ဆိုတာက ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အကျိုးကျေးဇူးတွေ အများအပြား ပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ အရာပါ။ အကျိုးကျေးဇူးဖြစ်ထွန်းစေဖို့ဆိုတဲ့အရာတွေကို ကြည့်လိုက်တိုင်း သံလွင်ဆီက နေရာတစ်နေရာကို အခိုင်အမာရယူထားတာကြောင့် ဒီနေ့မှာ မျက်နှာအသားအရေနဲ့ပတ်သက်လို့ သံလွင်ဆီရဲ့ အကျိုးပြုပုံပြုနည်းတွေကို တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ၁။ Antioxidant...
ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်၊ တရုတ်ဇီဝလက်နက်နဲ့ နောက်ကွယ်ကဇာစ်မြစ်ကိုအထောက်အထားများနဲ့ဖော်ထုတ်ထားပြီ
အထိနာနေတဲ့ အမေရိကန်အတွက် အိုဘားမားပေးတဲ့အကြံ၊ ကယ်တင်ရှင်တရုတ် နဲ့ အမေရိကန်စူပါ ပါဝါနေရာက ဆင်းပေးရမလား?
သင်ပထမဆုံးမြင်ရတဲ့အရာက အချစ်ရေးအပေါ် သင့်ရဲ့ အမြင်တွေကို ပြောပြပါလိမ့်မယ်
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ရဲ႕ဘဝက ဘယ္လိုခက္ခဲေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနတဲ့ သရုပ္ေဖာ္ပံုေလးေတြ
ေလ့လာမႈေတြအရ ဥာဏ္ရည္ထက္ျမက္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြအမ်ားစု Single ျဖစ္ေနရတဲ့အေၾကာင္းရင္း
Copyright © 2017 Lifestyle Myanmar.
Digital Media Production in Myanmar.